ချစ်ကြည်အေး: မပြယ်သောချစ်ခြင်း မယွင်းသောသစ္စာ
“ဟဲ့ ပြေအေး ရပ်စမ်း အခု၊ နင် ဒါ ဘာလုပ်တာလဲ ဘာလုပ်တာလဲဟင်”
“မမ မမရယ် ကျွန်တော် သေပါရစေတော့၊ ကျွန်တော် ဒီဘဝကြီးထဲမှာ မနေပါရစေနဲ့တော့ မမရယ်။ အီးဟီး ဟီး ကျွန်တော် သေချင်တယ် သေချင်တယ်။ ကျွန်တော် သေပါရစေ မမရယ်”
သူ့ခေါင်းကို ထုရိုက်ရင်း ငိုပြောပြောနေသော မောင်လေးပြေအေးကို မေဦး မကြည့်ရက်ပါ။ မောင်လေးဟာ အစွဲအလမ်း ကြီးလွန်းလှသည်။ ကြာခဲ့ပြီ၊ တကယ်ဆို သုံးနှစ်ကြီးများတောင် ကြာခဲ့ပြီပဲလေ။
“ပြေအေး မောင်လေး မောင်လေးရယ်”
မမဦးက ကျွန်တော့်ကိုဖက်ရင်း သူပါ ရောငိုလေသည်။ ပြီးတော့ ဆုပ်ကိုင်ထားသော အိပ်ဆေးပြားများကို ကျွန်တော့် လက်ထဲကနေဖြည်ပြီး တစ်လုံးချင်းယူသည်။
“ငါ့မောင်လေးရယ် နင့်မလည်း ဒုက္ခပဲ။ ငါ နားလည်ပါတယ်။ နင် ခုထိ ယမုံ့ကို မမေ့နိူင်သေးဘူးဆိုတာ၊ ဒါပေမဲ့ သူကြင်မှ ကိုယ်ကြင်ပေါ့ မောင်လေးရယ်၊ ကိုယ်က ယောကျာ်းလေးပဲဟာ အနေသာကြီး။ သူတောင် နေနိူင်သေးတာ”
“ဒါပေမဲ့ မမရယ် ကျွန်တော်က ယမုံ့ကို ချစ်တယ်၊ သူ ရက်စက်ပေမဲ့ ကျွန်တော် မစိမ်းကားနိူင်ဘူး၊ သူ ထားပစ်ခဲ့ပေမဲ့ ကျွန်တော် မနေခဲ့နိူင်ဘူး မမရဲ့”
“မနေခဲ့နိူင်လည်း နင်လိုက်သွားလို့မှ မရတာဘဲ ပြေအေးရယ်။ ငါ သိပါတယ်ဟဲ့၊ နင် ယမုံ့ကို ဘယ်လောက်ချစ်တယ် ဆိုတာ၊ ဒါပေမဲ့ သားလေးမုံပြေထက် ရှိသေးတယ်လေ။ နင်လည်း သိသားနဲ့ ငါကတော့ ငါ့တူလေးကို မိတဆိုးလေးကနေ မိဘမဲ့မဖြစ်စေချင်ဘူး ပြေအေးရယ်။ နင် စဉ်းစားပါ။ နင့်သားလေးမျက်နှာကို ကြည့်စမ်းပါဟယ်”
“ဟော သားသားပြန်လာပြီ၊ ပြေအေး နင့်မျက်ရည်တွေ သုတ်စမ်း၊ ကလေးမမြင်စေနဲ့ ကြားလား”
ကျွန်တော့်ကိုပြောရင်း ကျောင်းကားပေါ်ကဆင်းလာသည့် သားသားကို ဆရာမလက်ထဲကနေခေါ်ဖို့ အိမ်ဝဆီကို မမဦး အပြေးလေး ထွက်သွားလေသည်။
သားသားတောင် လေးနှစ်ပြည့်တော့မှာပဲ။ ဘာလိုလိုနဲ့ မုံ သူတို့သားအဖကိုထားခဲ့တာ သုံးနှစ်တောင် ပြည့်တော့မည်။ သုံးနှစ်ရှိတော့မယ် မုံရေ၊ ကိုယ်နဲ့ သားလေးကို မုံ ထားပစ်ခဲ့ရက်တာ သုံးနှစ်ပြည့်တော့မယ်။ ကိုယ် တစ်နေ့မှ မေ့မရဘူးဆိုတာ မုံသိစေချင်တယ်။ မုံ သိစေချင်ပါရဲ့ မုံရယ်…..။ ခပ်ဆွေးဆွေးအတွေးကြောင့် သုတ်နေသည့်ကြားမှပင် မျက်ရည်များက ကျွန်တော့်ပါးပြင်ပေါ် ပေါက်ကနဲကျလာပြန်လေသည်။
“ကိုရေ မုံ သွားပြီးအားပေးမှ ဖြစ်တော့မယ်။ ကောင်းကောင်းတစ်ယောက်ထဲ သနားပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့မှာ ဆွေမျိုးရယ် အသိအကျွမ်းရယ်လို့လည်း သိပ်မရှိတော့ ခမျာအားငယ်ရှာမှာပဲ။ ပြီးတော့ ဆရာမကြီးမဆုံးခင် ဆေးရုံမှာ မုံ့ကိုတွေ့တော့ သေချာမှာသွားတာ။ မုံရယ် ဆရာမတို့မရှိရင် သမီးမောင်လေးကို စောင့်ရှောက်လိုက်ပါနော် တဲ့”
“အေးလေ သနားပါတယ်ကွာ၊ ကောင်လေး ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ။ သူက ဒီနှစ် ဆယ်တန်းဖြေရမှာ မဟုတ်လား”
“ဟုတ်တယ် ကို၊ ကောင်လေးကြည့်ရတာ မျက်လုံးလေးတွေက ကြောင်စီစီလေးလိုပဲ၊ သနားပါတယ်။ စာမေးပွဲကလည်း နီးနေပြီ။ အောင်ပါ့မလားတောင် မသိဘူး”
အင်း ကောင်လေး သနားပါတယ်။ မုံတို့ကျောင်းက ဆရာမကြီးရဲ့ သားလေး။ အဖေရော အမေပါ ကားအက်ဆီးဒင့်မှာ ဆုံးသွားကြတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ဟာ အတော်လေး ကြေကွဲစရာ။ ဆယ်ကျော်သက်ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ရင်ထဲ ဘယ်လိုများ ခံစားနိူင်ပါ့မလဲလေ။ ကောင်းကင်ကြီးပြိုကျသလို နေလိမ့်မည်။ ထိုနေ့ကတွေ့ခဲ့ရသော ကောင်ကလေးမျက်နှာကြောင်စီစီကို သားသမီးချင်းစာနာစိတ်နှင့် ပြေးမြင်သည်။ တွေးကြည့်ရုံနှင့်ပင် ကျွန်တော့်ရင်ထဲ မကောင်းလှ။
“ကိုရေ သိလား၊ မုံတို့ထင်တဲ့အတိုင်းပဲ ကောင်လေးက ရှော့ခ်ရသွားတာ။ ဆရာဝန်ကြီးက ဒီနှစ် စာမေးပွဲ ဝင်မဖြေစေချင်ဘူး တဲ့၊ ကောင်လေးအတွက် လိုအပ်တဲ့ စိတ်ကုထုံးတွေပေးပြီး ကျန်းမာအောင် အရင်ပြန်လုပ်ရမယ် တဲ့”
အိမ်ပြန်ရောက်ရောက်ချင်း စိတ်မကောင်းစွာ မျက်နှာကလေးညှိုးကာ ပြောလာသောမုံ့ကို ဘယ်လိုနှစ်သိမ့်ရမည်ပင် မသိ တတ်တော့ပေ။
“အေးပေါ့ကွာ၊ ကိုယ်တို့လည်း သားသမီးမှ မရှိတာပဲ၊ တတ်နိူင်သလောက်တော့ စောင့်ရှောက်ကြတာပေါ့ကွာ”
“ကိုရေ မုံလေ ကောင်လေးကျန်းမာလာတဲ့အခါ အိမ်မှာခေါ်ပြီး စာပြပေးချင်တယ် သိလား”
“အင်း ကောင်းသားပဲ မုံရ”
ကျောင်းဆရာမပီပီ ကလေးတစ်ယောက်မမြင်လိုက်နှင့်၊ မြင်သည်နှင့် စာသင်ပေးချင်စိတ်ရှိသောမုံ့ကို ကျွန်တော် မြတ်နိူးသည်။
သို့သော် သိုက်ဆရာ လှေပေါ်ခေါ်တင်လာသည့်အဖြစ်မျိုးထက် ဆိုးဝါးသည့်အဖြစ်သို့ ရောက်တော့မည်ကို ကျွန်တော်ရော မုံပါ မသိခဲ့ကြ။ ကံကြမ္မာကိုပဲ ယိုးရတော့မည်လား၊ သနားတတ်သော၊ ယိမ်းယိုင်လွယ်သော မုံ့ကိုပဲ အပြစ် ဖွဲ့ရမည်လား၊ နီးစပ်ရာနွယ် တစ်မျှင်ကိုဖမ်းဆုပ်သူ ကူကယ်ရာမဲ့ကောင်လေးကိုပဲ လက်ညှိုးထိုးရမည်လား ကျွန်တော် မသိတော့ပေ။ သေချာသည်မှာ ကျွန်တော့်ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံး အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာဖြစ်ခဲ့ခြင်းပင်။
အခြေအနေကို ရိပ်မိသော ကျွန်တော်က ကလေးယူကြဖို့ မုံ့ကို တစ်ဘက်လှည့်နှင့် ချော့ရတော့သည်။ မုံကမူ ခေါင်းမာဆဲပေ။ ပင်ကိုယ်က ကျန်းမာရေးမကောင်းဘဲ နှလုံးအားနည်းသောမုံက ကျန်းမာရေးအကြောင်းပြကာ ကလေးမယူလိုဟု ငြင်းဆန်ဆဲ။ သို့သော် နောက်ဆုံးတော့ သားဖွားမီးယပ်ဆရာဝန်ကြီးထံပြသကာ ကလေးရဖို့ ကြိုးစားရန် မုံ လိုက်လျောခဲ့လေသည်။
ကလေးရလျှင်ဖြင့် သံယောဇဉ်ကြိုးတို့ခိုင်မြဲကာ မုံ ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်ဟူသော ကျွန်တော့်အထင်သည် တက်တက် စင်အောင်လွဲမှားကြောင်း သားသားအခါလည်အရောက်မှာ သိခဲ့ရတော့၏။
သနားချစ်တဲ့လား၊ ခုမှ တကယ်ချစ်တဲ့သူကို တွေ့တာတဲ့လား၊ မုံ ကောင်ကလေးနဲ့ မခွဲနိူင်တော့ဘူး တဲ့လား…..
မုံ့နှုတ်ထွက်စကားများသည် ကျွန်တော့်နေ့ရက်များကို အရှင်လတ်လတ် သေစေခဲ့သည်။ မုံ တောင်းဆိုသော ကွာရှင်းခွင့် ဆိုသည်ကို ကျွန်တော် လုံးဝမပေးနိူင်။ သည်မှာပင် အခါလည်သားကလေးနှင့် ကျွန်တော့်ကိုထားရစ်ကာ မုံ အိမ်ပေါ်မှ ဆင်းသွားလေသည်။
“ဒီမှာ ကို အတူနေကြပြီး စိတ်ချင်းမနီးစပ်မှတော့ ဘာလုပ်တော့မှာလဲ၊ မုံ့ကို လွတ်လပ်ခွင့်ပေးပါ။ ယောကျာ်းတစ်ယောက်ရဲ့ရင်ခွင်ထဲကနေ နောက်တစ်ယောက်ကို တမ်းတနေရတဲ့အဖြစ်မျိုးမှာ မုံ မနေချင်တော့ဘူး။ မုံ မပျော်ဘူး။ မုံ့မှာ အပြစ်ရှိပါတယ်။ မုံ ဝန်ခံပါတယ်၊ ကိုကြိုက်တဲ့ အပြစ်သာပေးပါ။ မုံ ကျေကျေနပ်နပ် ခံယူပါ့မယ်”
နည်းနည်းကလေးမှ ခေါင်းမငုံ့ဘဲ ခပ်တင်းတင်းဆိုနေတဲ့ မုံ့မျက်နှာ။ မုံ့စကားတွေ…..။
ကျွန်တော့်ညာလက် လေထဲမြောက်တက်သွားသည်အထိ စိတ်တို့ ထောင်းကနဲဖြစ်သွားသေးသည်။ မျက်စေ့စုံမှိတ်ကာ ပါးကို ကျွန်တော့်ရှေ့ထိုးပေးလိုက်သော မုံ့မျက်နှာကိုမြင်မှ ကျွန်တော့်လက်တွေ လေထဲမှာတင် ရပ်တန့်သွားရသည်။
သနားလိုက်တာ မုံကလေးရယ်….၊ မိုက်လိုက်တဲ့ မုံ၊ ရက်စက်တဲ့ မုံ၊ ကိုယ် မရိုက်ရက်ပါဘူးလေ….
လက်ကိုပြန်ချကာ မျက်စေ့စုံမှိတ်ထားသော မုံ့မျက်နှာကလေးကို ကြည့်နေမိဆဲ။ ဝဲဘက်ရင်ဘတ်တစ်ခုလုံး အောင့်တက်လာကာ လှိုက်ကနဲဝမ်းနည်းစိတ်နှင့် မုံ့ကို ရင်ခွင်ထဲ ဆွဲသွင်းပွေ့ဖက်ထားလိုက်မိသည်။ ခွဲမသွားပါနဲ့၊ ကိုယ့်ကို မထားခဲ့ပါနဲ့ မုံရယ်။ မုံက မရုန်းပါ၊ ကျွန်တော့်ရင်ခွင်ထဲမှာ ငြိမ်သက်လို့နေသည်။ နောက်ဆုံးအကြိမ် အခွင့်အရေးပေးခြင်းလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်။
“မုံ မုံရယ် ကို့ကို ထားမသွားပါနဲ့၊ ကိုနဲ့သားလေးကို ခွဲမသွားပါနဲ့ နော် မုံ။ မုံမရှိရင် ကို မနေနိူင်လို့ပါ မုံရယ်။ နော် ကိုလေ မုံ့ကို သိပ်ချစ်တယ်။ ခွဲမသွားပါနဲ့နော် မုံ”
ယောကျာ်းတစ်ယောက်၏ အနှိမ့်ချနိူင်ဆုံးအထိ ကျွန်တော် နှိမ့်ချပေးခဲ့ပါသည်။ မုံက ကျွန်တော့်စကားအကြားမှာ သတိဝင်လာပုံနှင့် ကျွန်တော့်ရင်ခွင်ထဲမှ သာသာရုန်းထွက်သည်။ အိပ်ပျော်နေသော သားလေးကို နမ်းသည်။ ပြီးမှအခန်းထဲသို့ ဝင်သွားပြီး ထုတ်ပိုးထားသောသေတ္တာကိုဆွဲကာ အိမ်ပေါ်မှ ဆင်းသွားတော့သည်။
မုံမရှိတော့မှ အိပ်ပျော်နေသော သားလေးကိုဖက်ကာ ကျွန်တော် ငိုမိသည်။ အမိမဲ့သားလေးရေ ဖေဖေလေ သားလေးကို ရေနည်းငါးတော့ အဖြစ်မခံနိူင်ဘူး။ ဖေဖေ နှစ်ယောက်စာ ချစ်ပါ့မယ် ငါ့သားရယ်။ သားမေမေ နေရာမှာရော ဖေဖေ့အတွက်ပါ ဖေဖေပုံချစ်ပါ့မယ်နော် သားလေး။ ဘာမှနားလည်ဦးမည်မဟုတ်သော တစ်နှစ်သားကလေးကို တိုင်တည်ပြောဆိုရင်း အရူးတစ်ယောက်လို ငိုကြွေးနေမိသည်။
သားကလေးပါးကို အထပ်ထပ်အခါအခါနမ်းမိတော့ သူ့ပါးပေါ်မှ မျက်ရည်တို့ ကူးလူးစိုစွတ်ကာ သားက လန့်ပြီး ငိုကြွေးပါတော့သည်။ သားလည်း ငို၊ ကျွန်တော်လည်း ငို…..။ မျက်ရည်များကုန်သလောက်ရှိသော် မာနနှင့်အရှက်တို့ ခေါင်းထောင်ထလာသည်။ နေပါစေလေ၊ ပြန်မလာပါနဲ့တော့၊ ပြန်မလာပါနဲ့တော့ မုံရယ်။ တစ်နေ့တော့ ရှိဦးမှာပါ။ တစ်နေ့နေ့ပေါ့….။ တစ်နေ့မှာ…ကို့မေတ္တာတွေကို မုံနားလည်လာတဲ့ တစ်နေ့မှာပေါ့…..။
မုံ့မိဘများဘက်မှ အမွေပြတ်ကြော်ငြာကိုဖတ်ရတော့ မုံ့အတွက် ကျွန်တော် စိတ်မကောင်းပြန်။ အမိုက်မလေး မုံ ဘယ်လိုများ နေရှာမှာပါလိမ့်တွေးရင်း သံယောဇဉ်လက်ကျန်တို့ဖြင့် ရင်သည် လူးလွန့်၏။ မုံကတော့ ခပ်တည်တည်ပင်၊ မိဘများပိုင်ဆိုင်၍ သူ့နာမည်နှင့်ထားသောတိုက်ခန်းမှာ အခန့်သားတက်နေကာ ဆင်းမပေးဟု ကြားရသည်။ သည်တိုက်ခန်းက မိဘများဆုံးပါးမှသာ မုံဆက်ခံရရှိမည့်တိုက်ခန်းပေ။ သို့သော် အမွေဖြတ်ပြီးသည့်တိုင် မုံက ဆင်းမပေးသလို မုံ့မိဘများကလည်း သားသမီးမို့ အတင်းနှင်မချရက်သည်ပင်။
မုံမရှိမှ သားတစ်ယောက်အပေါ် မိခင်၏ဝန်တာ မည်မျှကြီးမားသည်ကို သိလာရသည်။ ညညဆို သားက မနိူးဘဲ တစ်ချိုးတည်းအိပ်သော်လည်း နိူ့တစ်ကြိမ်ဖျော်တိုက်ရသေးသည်၊ သေးများစိုနေသလား ထထကြည့်ကာ သေးစိုအဝတ်တို့ကို လဲပေးရသည်။ သားကို ကျွေးလေ့ရှိသည့် ဆန်မှုန့် နို့မှုန့်များ တံဆိပ်လွဲသည်နှင့် သားက ဝမ်းသွားတတ်လေသည်။ နို့ဘူး ရေခွက်နှင့် ထမင်းပန်းကန် စသည်များကို ပေါင်းပြီးမှ သုံးရသည်။ ကြာတော့ အလုပ်တစ်ဘက်နှင့် တစ်ယောက်ထဲ မနိူင်တော့ပေ။
မမမေဦးကို ကလေးထိန်းပေးဖို့ရန်ခေါ်တော့ မမက အိုးပစ်အိမ်ပစ်ကာ သူ့ထံ လာနေပေးရှာပါသည်။ စနေ-တနင်္ဂနွေလိုနေ့များမှသာ အိမ်ကိုပြန်ချင်ပြန်ကာ ကျန်ရက်များတွင် တစ်ပတ်မှာ သုံး-လေးရက်ခန့် သူ့တူကလေးကို လာကြည့်ပေး၊ ချက်ပြုတ်လျှော်ဖွတ်ပေး၊ အိမ်ရှင်းပေးနှင့် မမခမျာ “သည်တာဝန်တွေ မလိုချင်လို့ ငါ အပျိုကြီး လုပ်နေတာဟေ့၊ ခု နင်တို့သားအဖနှိပ်စက်လို့ ငါ့မှာ လုပ်နေရပြီဟဲ့”ဟု သူ့တူကလေးကို ချော့ကာမြှူကာနှင့် ကျွန်တော်ကြားအောင် တမင်ပြောတတ်လေသည်။
မုံ့သတင်းများကိုတော့ ကြားနေရပါသည်။ မိုးမမြင်လေမမြင် ပျော်နေသည့် မုံ၊ အိမ်ထောင်ဆိုသည့်….၊ မိသားစုဆိုသည့်အနှောင်အဖွဲ့မှ ကိုယ်လွတ်ရုန်းကာ အချစ်သစ်နောက် ကောက်ကောက်ပါသွားသည့် မုံ….။ မုံ တကယ်ပဲ ရက်စက်ပါသည်။
မုံသည် သစ္စာတရားဆိုသည်ကို တကယ့်အချစ်စစ်ဟု သူယူဆသည့် ခဏတာယိမ်းယိုင်မှုနှင့် လဲလှယ်ရဲသူ၊ မိုက်မဲရဲခဲ့လေသူတည်း။
မုံသည် သားရဲများနောက်ကလိုက်နေသမျှ ရှေ့သို့သာ စွတ်တိုးကာ ပြေးလွှားနေရသည်။ ရှေ့မှာကလည်း မှောင်နဲ့မည်းမည်းမို့ လွတ်မည်ထင်ရာသာ မှန်းပြေးပေတော့။ သစ်ပင်တစ်ပင်….ရှေ့မှာ တွေ့ပြီ။ ဝမ်းသာအားရ အပင်ပေါ်တက်ပြေးပြန်တော့ ပင်စည်ပတ်လည်တွင် ချွန်မြသောဆူးတို့ဖြင့် ဝန်းရံသည်မို့ မုံ့အသားတို့ပေါက်ပြဲကာ သွေးစိမ်းတို့ စို့လေသည်။ တစ်ဖန် ရှေ့သို့သာ သွေးရူးသွေးတန်းပြေးပြန်သော် ပွက်ပွက်ဆူနေသည့် ရွှံ့နွံအိုင်ထဲ ပြုတ်ကျကာ မုံ့တစ်ကိုယ်လုံးမှ အရေပြားတို့ အလွှားလိုက်ကွာကျကာ အားကနဲလန့်အော်မိတော့သည်။
ဘုရား၊ ဘုရား…မုံ ကြောက်လန့်ကာ ဘုရားတမိသည်။ သည်လိုအိပ်မက်မျိုးတွေ မုံ မကြာခဏမက်သည်။ မုံ့တစ်ကိုယ်လုံးမှာ
ချွေးများဖြင့် စိုနစ်လျှက်ရှိသည်။ ငရဲကျတယ်ဆိုတာ ဒါမျိုးများလား မသိ။ ကုတင်ခေါင်းရင်းမှ မီးသီးဝါဖန့်ဖန့်ကိုဖွင့်ကာ အ်ိပ်ရာဘေးရှိရေချိုင့်ထဲမှ ရေတစ်ဖန်ခွက်ငှဲ့ကာ သောက်သည်။ စိတ်တို့ တည်ငြိမ်စေရန် ပုတီးတစ်လုံးချင်းချ၍ အရဟံဂုဏ်တော်ပွားသည်။
မုံ ကို့အိမ်ပေါ်မှ ဆင်းခဲ့တာ နှနှစ်ကျော်ခဲ့ပြီ။ သားကလေး နေကောင်းရဲ့လား၊ အမေဆိုတာကိုရော သားက မှတ်မိပါဦးမလား၊ ကိုရော အဆင်ပြေရဲ့လား…မုံ တွေဝေ တွေးတောတတ်ပြီ။ မုံ့စိတ်တို့သည် အရဟံဂုဏ်တော်နှင့် ကိုတို့သားအဖကြား ပြေးလွှားလျှက်ရှိသည်။
မနက်လင်းသော် မုံ့မျက်ဝန်းတို့မှာ ခွက်ဝင်လုနီးနီး၊ မုံ့မျက်နှာမှာ နဂိုကမှ ရှည်သွယ်ကာ ခုတော့ ပါးလျချောင်ကျလို့ နေခဲ့ပြီ။ ကောင်ကလေးသည် သက်တူရွယ်တူကောင်မလေးတစ်ယောက်နှင့် တွေ့ဆုံလက်တွဲကာ “အချစ်စစ်ဆိုတာ ဒါပဲ၊ မမယမုံကို ကျွန်တော် သံယောဇဉ်တော့ ရှိပါတယ်”ဟု မုံ့ကို ပြောသွားထားရစ်ခဲ့ပြီ။ ဝဋ်ဆိုသည်မှာ နောက်တစ်ဘဝပင် မစောင့်…။ မုံသည် သစ္စာဆူး စူးခဲ့လေပြီ။
စိတ်ညစ်ညစ်နှင့် မုံ ပျော်သလိုနေပစ်လိုက်သည်။ ညဆိုလျှင် တစ်ညလုံး ကလပ်တွေ လျှောက်သွားသည်။ မနက်မိုးလင်းလုမှ အိမ်ပြန်လာသည်။ ညအမှောင်မှာ မုံ မအိပ်ရဲ။ မုံ အိပ်မက်ဆိုးညတွေမှ ထွက်ပြေးချင်သည်လေ။ မနက်ဆို တမနက်လုံး အိပ်စက်နေကာ ထမင်းစားရကောင်းမှန်းလည်း မသိတော့၊ ဆာလောင်မှုတို့လည်း ပျောက်ပြီ။ ညနေဆိုလျှင်တော့ မုံ အိပ်ရာမှ နိူးထကာ တရုတ်တန်းဈေးသွားသည်။ တွေ့သမျှ စားသည်။ မူးအောင် သောက်သည်။
အချစ်ဆိုသည်ကို မုံ ကြောက်သည်။ သူ့အနားကပ်လာသော ယောကျာ်းကြီးငယ်တို့နှင့် ခဏတာ ပျော်ရုံသာ တွဲသည်။ ယောကျာ်းများထံမှ ချစ်တယ် မုံဟု ဆိုလာလျှင် သူတို့မျက်နှာကို တည့်တည့်ကြည့်ကာ ဟားတိုက်ရယ်မောမြဲ၊ ပါးစပ်မှာတေ့ထားသော စီးကရက်ကို လက်ကြားပြောင်းညှပ်လိုက်ပြီး မီးခိုးငွေ့များကို သူတို့မျက်နှာပေါ် မှုတ်ထုတ်လိုက်တတ်မြဲပေ။ တကယ်တော့ မုံက လူညာတွေဟုဆိုကာ သူတို့ပါးပြင်ကို ဖြန်းကနဲနေအောင် ရိုက်လိုက်ချင်တာသာဖြစ်သည်။ ကောင်ကလေးပေးခဲ့သော နာကျင်မှုအတွက်၊ မုံ့ဘဝ ခုလို ဇောက်ထိုး ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ပေါ့။ အို….မဟုတ်သေးပါဘူး၊ မုံကိုက ချစ်ခဲ့မိသည်ပဲ မဟုတ်လားဟု တွေးမိပြန်တော့ ရှိန်းကနဲနေအောင် အရှက်တို့ သွေး၌လှည့်ပတ်ပြန်လေသည်။
သည်ညတော့ မုံသည် ဘယ်နှစ်ခွက်မှန်းမသိသော အရက်တို့ကို သောက်သည်။ ထပ်ကာထပ်ကာဖြည့်၍ပေးသော ဝိုင်အနီတို့ကို ကျိုက်ကနဲ မော့ချသည်။ အရက်၊ ဝိုင်နှင့်ဘီယာ သုံးပင်လိမ်သော် မုံသည် လူမှန်းမသိတတ်တော့။ ကလပ်ထဲမှ ထွက်လာ၍ လမ်းမပေါ်ရောက်လျှင် လမ်းတို့သည် ခွက်ဝင်သွားလိုက် မောက်တက်လာလိုက်နှင့် လူးဖယ်လျှက်ရှိသည် ထင်၏။ မုံ့ခြေလှမ်းတို့ကို လမ်းအခွက်အမောက်အတိုင်း ဖိနင်းလိုက်၊ ဖွနင်းလိုက်နှင့် မုံသည် ယိုင်ထိုးလျှက်ရှိလေသည်။ စိတ်ကောင်းရှိသော ကားမောင်းသူ လူကောင်းကလေးတစ်ယောက်ကြောင့်သာ မုံ အိမ်သို့ တန်းတန်းမတ်မတ် ပြန်ရောက်သည်။
မုံ့ရှေ့မှာ ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံး ချာချာလည်လျှက်ရှိပြီ။ မတ်တတ်ပင်ကောင်းစွာ မရပ်နိူင်တော့။ ပူလွန်းလှ၍ ကိုယ်ပေါ်ရှိ အဝတ်အစားများကို ဆွဲချွတ်ကာ ကုတင်ပေါ် သည်အတိုင်းပစ်ပုံလိုက်ရင်း အိမ်သာထဲဝင်၊ အပေ့ါသွားဖို့ ပြင်လေသည်။ ပြီးသော် မုံသည် ကိုယ်ကိုမနိူင်ဘဲ အိမ်သာအိုးအနီးတွင် ပုံရက်သားလဲလေ၏။ ရင်တစ်ခုလုံး ပြည့်တက်လာကာ နားထဲမှ လေများထွက်ပြီး ဝေါ့ကနဲထိုးအန်တော့သည်။ အန်ပါများသော် မုံသည် အိမ်သာအိုးထဲ ခေါင်းစိုက်ကာ လက်နှစ်ဘက်ဖြင့် အိမ်သာအိုးကို ဖက်လျှက်သားရှိလေသည်။ အူတွေ အသည်းတွေ ပြတ်ထွက်တော့မလား ထင်ရအောင် အန်သည်။ လေတွေချည်းကျန်တော့သည်အထိ အန်ပစ်သည်။ ဘာမှ မကျန်တော့၊ ဗိုက်ထဲမှာ ဘာမှ မကျန်တော့သည်အထိ အန်ပြီးသော် လေးဘက်ထောက်သွားကာ ကုတင်ဆီ တရွေ့ရွေ့ ရွှေ့သည်။ ခုတင်ဘေးမှ ဖုန်းကို ကောက်ယူကာ နံပါတ်တစ်ခုကို ကြိုးစားလှည့်သည်။ တစ်ဘက်မှ ဘာဖြေသံမှ မကြားရသေးခင်မှာပင် မုံ့လက်မှ ဖုန်းသည် ဒေါက်ကနဲ ပြုတ်ကျတော့သည်။
ခုမှပင် မုံ့ဘဝသည် မှောင်အတိနှင့် ပြီးတော့၏။ မုံ ဘာဆို ဘာမှ မသိတော့….
ဘယ်လောက်ကြာကြာ အိပ်ပျော်သွားသည် မသိ။ မုံ နိူးလာတော့ ခါတိုင်းထက် လန်းဆန်းလျှက်ရှိသည်။ ရုတ်တရက် ထမည်ပြင်သော် စူးကနဲအသိကြောင့် တိတ်နှင့်ဆွဲကပ်ကာဖိထားသော လက်ဖမိုးမှ အပ်ကို မြင်သည်။ အပ်သည် မုံ့လက်ဖမိုးအကြောထဲထိုးစိုက်လျှက် ထိုမှတစ်ဆင့် ဆေးရည်အကြည်များ မုံ့ကိုယ်ထဲ စီးဝင်နေသည်။ ဒါကြောင့် မုံ အားရှိတာနေမည်။ နေပါဦး၊ မုံ ဒီကို ဘယ်လိုရောက်လာတာပါလိမ့်။ သိပြီ။ မုံ တအားမူးနေတဲ့ညက… တစ်စုံတစ်ယောက်ဆီ ဖုန်းလှည့်မိခဲ့တာ မှတ်မိသည်။ ကို….။
မုံ သေလောက်အောင် မူးခဲ့ အန်ခဲ့တာ သတိရသည်။ မုံမျက်ဝန်းတို့ကို ပြန်လည် မှိတ်ထားလိုက်သည်။ မျက်ရည်များ….။ မငိုပါဘဲ မုံ့ပါးပြင်ပေါ်မှာ မျက်ရည်များ တပေါက်ပေါက်ကျလို့နေသည်။ မုံဟာ ဘာကြောင့်များ တခါတည်း သေမသွားတာပါလိမ့်။ သေသွားရင် ကောင်းမှာ၊ အမိုက်ဇာတ်သိမ်းမှာဟု မုံတွေးသည်။ ခုတော့ မုံ ရှင်လျှက်နှင့် ဝဋ်ခံရပေဦးမည်။
ထိုခဏမှာပင် မုံ့ပါးပေါ်မှ မျက်ရည်များကို လက်ကိုင်ပုဝါနှင့် တို့သုတ်ပေးနေသလို ခံစားလိုက်ရသည်။ မျက်နှာပေါ်မှ နုညံ့သောအတွေ့ကြောင့် မျက်လုံးများကို အားယူကာ ဖွင့်ကြည့်လိုက်မိသည်။ ဝိုးတဝါး ပုံရိပ်တစ်ခု။ မျက်ဝန်း၏ဆုံချက်က ချက်ချင်းတော့ မပြတ်သားသေး။
ရင်းနှီးလွန်းခဲ့သော မျက်ဝန်းတစ်စုံ၊ ကြင်နာတတ်သောမျက်ဝန်းများနှင့် ကို……။ မုံ့ဘေးမှာထိုင်ကာ မုံ့လက်ကလေးကို ဖွဖွကိုင်ထားလျှက်ရှိနေသည်။ မုံသည် တစ်ခုခုပြောချင်လွန်းကာ ဘာစကားမျှ နှုတ်က ထွက်ကျမလာ။ ကိုက မုံ့နှုတ်ခမ်းပေါ်ကို သူ့လက်ညှိုးကလေးနှင့်တေ့ကာ ဘာမှမပြောနဲ့ဦး၊ နေသာသလို နေဦးဟု ဆိုသည်။ မုံ ခေါင်းညိတ်ပြလိုက်မိသည် ထင်၏။ နောက်တော့ မုံ ဘာမှ မသိတော့ပြန်။ ပြန်လည်၍ အိပ်မောကျသွားကာ ထိုညက အိပ်မက်ဆိုးတို့ မုံ့ထံ ရောက်မလာခဲ့ပေ။
မုံ ဆေးရုံမှဆင်းလာပြီးစမှာ ကိုက မုံ့ထံ တစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်မျှ လာကြည့်သေးသည်။ မုံ နေကောင်းပြီ၊ ပုံမှန်နေထိုင်စားသောက်နိူင်ပြီဟု စိတ်ချလက်ချရှိသော် နောက်ထပ် ပေါ်မလာတော့။ တစ်ခုခုဆို ဖုန်းဆက်လိုက်နော်ဟု မှာကာ နောက်လှည့်မကြည့်စတမ်း ထွက်သွားလေ၏။
မုံသည် တစ်ယောက်ထဲနေ့ရက်များကို ဖြတ်သန်းရပြန်သည်။ သို့သော် အရင်လို မမိုက်တော့။ နေချင်သလို မနေတော့၊ စာသင်နှစ်အသစ်အတွက် ပြဌာန်းစာအုပ်များကို လေ့လာကာ စာသင်ရန် ပြန်လည်ပြင်ဆင်သည်။ ကျောင်းဆရာမလေးဘဝကို မုံ လွမ်းသည်။ ကျောင်းကြီးနှင့် စာသင်ဖော်စာသင်ဖက်များ၊ တပည့်များသည် မုံ့ကို အရင်ကလို ကြိုဆိုမည်လား၊ အရင်ကလို လှိုက်လှဲနွေးထွေးစွာ လက်ခံနိူင်ပါတော့မည်လား၊ မုံ တွေးရင်း ဝမ်းနည်းရသည်။ လက်မခံနိူင်လည်း ရှိစေတော့၊ မုံက မိုက်ခဲ့သည်ပဲ။
မနေ့ကတော့ ကို့အစ်မကြီး မမမေဦးထံမှ ဖုန်းလာသည်။ သားက ဒီနေ့ ကျောင်းအပ်ရတော့မည်ဟု ဆိုသည်။ သူငယ်တန်း စတက်ရတော့မည့် သားကလေးကို မုံ တွေ့ချင်လှသည်။ တစ်ခြားကလေးငယ်တွေ မိစုံဘစုံနှင့် ကျောင်းအပ်ချိန်မှာ သားကလေးများ မျက်နှာငယ်နေမလား….။ မုံ ငိုချင်လာသည်။ စိတ်ကိုတင်းကာ ရေချိုး အဝတ်အစားလဲသည်။ သားတက်ရမည့် ကျောင်းကို မုံ သွားရမည်။
လူတွေ၏ အကြည့်မြားစူးတို့ မုံ့ကိုယ်မှာ ဝင်ရောက် ဆူးစိုက်ပါစေတော့၊ မုံ ရင်ဆိုင်ရဲရမည်ပေ။
မုံ့ကိုတွေ့တော့ ကို့မျက်နှာက ဝင်းပလို့သွားသည်။ “မေမေလာပြီ”ဟု ဆိုကာ သားလက်ကလေးတစ်ဘက်ကို မုံ့လက်ထဲ ထည့်သည်။ သားက ရုတ်တရက်မို့ ကြောင်နေကာ နောက်မှ မေမေဟု ခေါ်လေသည်။
“မုံ့ကို သားက သိပါတယ်။ မေမေက ဟိုးအဝေးကြီးကို ခဏသွားနေတာ သားရဲ့လို့ ကိုက ပြောပြထားတယ်လေ”
မုံသည် ငိုမိတော့မလိုမျက်နှာနှင့် အားတင်းပြုံးပြလိုက်ကာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရယ်လို့ အသံတုန်တုန်နှင့် ပြောလိုက်မိသည်။ ကျောင်းအပ်ဖို့ လျှောက်လွှာဖြည့်ကြတော့ မိခင်အမည် ဆိုသောနေရာမှာ ဒေါ်ကျော့ယမုံ ဟု ဖြည့်ရင်း မုံဟာ သားမေမေနေရာမှာ ထိုက်တန်ပါသေးရဲ့လားဟု နင့်ကနဲခံစားရပြန်သည်။ ကို့မျက်နှာကတော့ ပြုံးချိုရွှင်လို့။ မုံ့မှာသာ…အပြစ်တို့နှင့် ထိုက်တန်စွာ ရဲရဲမပျော်ဝံ့။
ကျောင်းအပ်အပြီးမှာ သားသားတို့အတန်းပိုင်က ဒီနေ့တော့ ကလေးတွေကို ပြန်ခေါ်သွားလို့ရတယ်ဆိုသည်နှင့် သားသားကို အိမ်ပြန်ခေါ်ခဲ့ဖို့ ကိုက ဆုံးဖြတ်သည်။ ကလေးကို သူ့မေမေနှင့်အတူ နေပါစေဦးဟု ကိုက ဆိုသည်။
အိမ်ရောက်တော့ မမဦးချက်ထားသော နေ့လည်စာကို မိသားစုသုံးယောက် အတူစားကြသည်။ ကိုက မုံ့ပန်းကန်ထဲ ဟင်းတွေ ထည့်ပေးရင်း မုံ အရမ်းပိန်နေတယ်၊ များများစားဟု ဆိုသည်။ ခဏနေတော့ မုံနှင့်ကို့ကို နှစ်ယောက်ထဲ ထားခဲ့ကာ သားကို မမဦးပဲ ထမင်းခွံ့လိုက်မယ်ဆိုကာ ထမင်းဝိုင်းမှ ခေါ်သွားလေသည်။ ထိုအခါမှ ကိုက မုံ့မျက်နှာကို သေချာကြည့်သည်။ မုံသည်လည်း ကို့မျက်နှာကို သေချာပြန်ကြည့်မိသည်။
“ကိုရောပဲ ပိန်တယ်၊ နှုတ်ခမ်းမွှေး မုတ်ဆိတ်မွှေးတွေလည်း သေချာ မရိတ်မသင်နဲ့၊ ကြည့်လို့လည်း မကောင်းဘူး”
“ဟောဗျာ ဒါတောင် ဒီနေ့ သားသားကျောင်းအပ်မှာမို့လို့ ကို သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်နေတာ။ မိန်းမပစ်သွားကတည်းက
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဖြစ်သလို ပစ်ချထားတာ၊ အဲဒါ မုံ မသိဘူးလား”
မုံ သိပါသည်လေ၊ ကို မုံ့ကို ဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာ။ သို့သော် မုံ့ကို အဲသည်လောက် ချစ်ရန်၊ အဲသည်လောက် ခွင့်လွှတ်ရန် မသင့်ပါ။ မုံသည် ကို့အချစ် ကို့မေတ္တာ ကို့ခွင့်လွှတ်ခြင်းများနှင့် ထိုက်တန်သောမိန်းမ မဟုတ်။
“ကဲ စားပြီးရင် ပြန်တော့နော်၊ မုံ့အိမ်အထိ ကို လိုက်ပို့မယ်”
“ဟင် မုံက ပြန်ရမှာလား”
“အေးပေါ့ ဘာလဲ မုံက မပြန်ချင်ဘူးလား”
“အင်းလေ ကိုသိလား၊ တိုက်ခန်းသော့ကို ဖေဖေတို့ဆီ ဒီမနက်ပဲ မုံ ပြန်အပ်လိုက်ပြီ”
“ဟာ…တကယ်လား၊ တကယ်လား မုံ၊ ကိုတို့ မိသားစုလေး တူတူပြန်နေရတော့မယ်ပေါ့၊ ဟား ပျော်လိုက်တာ မုံရာ၊ မုံ သိလား ကိုလေ မုံ့ကို သိပ်ချစ်တယ်၊ ခုထိလည်း တစ်စက်ကလေးမှ မလျော့ဘူး။ အရင်ကလိုပဲ အရင်ကအတိုင်းပဲ သိလား မုံ”
“ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုရယ်၊ မုံ့အပေါ် မေတ္တာမပျက်တာ၊ ချစ်နေတုန်းပဲဆိုတာသိရလို့ မုံ ဝမ်းသာတယ်။ မုံ လိမ်မာပါတော့မယ် ကိုရယ်၊ မုံလေ ဘယ်တော့မှ မမိုက်တော့ဘူး နော် ကို” နှုတ်ကဖွင့်ဆိုရန်မူ မုံ မရဲပါ။ စိတ်ထဲမှသာ တိုင်တည်ပြီး ကို့ကို ကတိတွေ ပေးနေမိသည်။ မမဦးကတော့ မုံ့အပေါ် ကြည်ကြည်ဖြူဖြူကြီးမဟုတ်သည့်တိုင် သူ့မောင်ကိုယ်တိုင်က သူ့မိန်းမကို မပစ်နိူင်သည်ကတစ်ကြောင်း၊ သား၏မေမေဖြစ်နေသည်ကတစ်ကြောင်းတို့ကြောင့် မပြောသာသည့်အနေအထားနှင့် ရှိလေ၏။
“ဖေဖေ သားကို ထမင်းခွံပါ။ ကြီးကြီးမေခွံ့တာ သားမစားချင်ဘူး၊ ဖေဖေပဲခွံ့”
မုံ့မျက်နှာနားကနေ ခွာလိုက်ရင်း သားသားကို ပြောလိုက်တဲ့ ကို့အီလည်လည်စကားသံကြောင့် မုံ ရယ်မိတော့သည်။ ကိုကလည်း မချိုမချဉ်မျက်နှာနှင့် မုံနှင့်အတူရောယောင်ရယ်သည်။
“ကိုတို့ မိသားစုလေး ဒီလိုပဲ အမြဲပျော်ပျော်နေသွားကြမယ် နော် မုံ”
နွမ်းနယ်ပါးလျသော်လည်း ကြည်လင်သော မုံ့မျက်နှာလေးကိုကြည့်ကာ ကျွန်တော်နှစ်လိုအားရစွာ ပြုံးမိပြန်သည်။
“ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ် အစ်ကို၊ စိတ်ချပါ”ဟု ခေါင်းလေးငုံ့ကာ ကတိပေးခဲ့သော၊ အမှားတစ်ခုအတွက် ခွင့်လွှတ်ပေးပါရန် ဝန်ချတောင်းပန်ခဲ့သော ကောင်ကလေးမျက်နှာကို ပြန်လည်မြင်ယောင်ရင်း “ကျေးဇူးပါ ညီ”ဟု စိတ်ထဲမှ ဆိုမိသည်။
ကောင်ကလေးနှင့်ကျွန်တော့်အကြား အမျိုးသားချင်းရှိအပ်သော နားလည်မှု၊ ညှိနှိုင်းမှု၊ အပေးအယူ ဒါတွေကို မုံ သိစရာမလို။ ကျွန်တော် မုံ့ကို ဘယ်တော့မှလည်း ပြောပြဖြစ်လိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။
“ကို မုံလေ ကို့ကို ကန်တော့ပါရစေ”
မုံသည် ခုံပေါ်ထိုင်နေရာမှ ကြမ်းပြင်ပေါ်ကျူံ့ကျူံ့လေးထိုင်ချကာ ကို့ခြေဖဝါးကို နဖူးနှင့်ထိအပ်လျှက် ကန်တော့လေသည်။
“ဟာ မုံ ထ ထပါကွာ၊ ကို ခွင့်လွှတ်ပါတယ်၊ ဟာ မငိုပါနဲ့ မငိုပါနဲ့တော့ မုံရယ်”
ပြောရင်းက ကြာငုံဖူးလို ယှက်ထားသော မုံ့လက်ကလေးနှစ်ဘက်ကို ဆွဲယူကာ ထူထစေသည်။
“ဟင့်အင်း ငိုပါရစေ မုံ ငိုပါရစေ ကိုရယ်”
ပြောပြီး မုံက ကလေးတစ်ယောက်လို ဝမ်းပန်းတနည်း ဟီးကနဲ ငိုချလေတော့သည်။
“ကိုပြောမယ် မုံ၊ လူဆိုတာ မှားတတ်တာပဲ။ မုံက ပင်ကိုယ်စိတ်ကိုက တဇွတ်ထိုးလုပ်တတ်တာ၊ အဲဒါတွေကိုလျှော့ ဟုတ်ပြီလား။ လုပ်ပြီးမှ မှားမှားမှန်မှန် ခံလိုက်မယ်ဆိုတာထက် မလုပ်ခင်ကသေချာစဉ်းစား၊ နောက်ကပါလာမယ့် အကျိုးဆက်တွေကိုပါ ထည့်စဉ်းစား၊ ပြီးမှ လုပ်သင့် မလုပ်သင့် ဆုံးဖြတ်၊ နားလည်လား၊ မုံဟာ မငယ်တော့ဘူး။ စိတ်ကို အလိုမလိုက်နဲ့၊ စိတ်မိုက်စိတ်ရိုင်းကို ချွန်းအုပ်၍ ကောင်းမွန်စွာ သိမ်းဆည်းထိန်းကျောင်းနိူင်မှ ပြည့်စုံတဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားကိုရမယ်တဲ့ မုံလည်း သိသားပဲ။ မုံဟာ တတ်သိနားလည်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်၊ အဆိုးအကောင်းကို ကိုယ်တိုင်ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိူင်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဆိုတာ ကိုယ် သိတယ်။ ကျောင်းဆရာမကြီးတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်နေပြီ။ တပည့်တွေကို ပဲ့ပြင်တည့်မတ်ပေးရမဲ့အစား မုံကိုယ်တိုင်က မိုက်နေတော့ ကလေးတွေကို ဘယ်လို ဆုံးမမလဲဟင်”
တကယ်ဆို မုံက လွန်ခဲ့တဲ့ လေးနှစ်ခန့်ကလို မုံ့ပါးကို မရိုက်ရုံတမယ်ရွယ်ခဲ့တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ နာကျင်သွားအောင် ရိုက်လိုက်စေချင်လှသည်။ သို့သော် ကိုက လက်ဝါးလေးနှင့်တောင်မရွယ်သည့်အပြင် မပြယ်သော ကို့အချစ်၊ မယွင်းသော ကို့သစ္စာသည် မုံ့ရင်ကို တဆစ်ဆစ်နာကျင်စေသည်။
ဆူးတစ်ချောင်းသည် ခပ်ကြီးကြီးခပ်မာမာ မြင်သာပါက နှုတ်ရထွင်ရလွယ်ကူလျှက် ပါးပါးမျှင်မျှင် မမြင်သာသော် ထွင်းရ ခက်လှမည်ပေ။ ကိုသည် အလုံးစုံသောခွင့်လွှတ်ခြင်းဖြင့် မုံ့နှလုံးသား၌ ခပ်မျှင်မျှင်ဆူးတစ်ချောင်းအား မထွင်သာမမြင်သာအောင် ထုတ်ချင်းခတ်ပေးလိုက်လေပြီ။ မုံ့ဘဝတစ်ခုလုံး နှလုံးသားတို့မျက်ရှနေအောင် တမြေ့မြေ့ခံစားလောင်ကျွမ်းရတော့မည်ဟု မုံ သိနေသည်။ ရှိစေ….။ မုံ့ အသက်ရှင်သန်နေသရွေ့ ထိုဆူးကလေးတစ်ချောင်း၏ မျက်ရှမှုကို မြတ်နိူးစွာထွေးပွေ့ ခံစားမည်သာ….။
yangonthar Sun Feb 09, 07:27:00 PM GMT+8
မိမိထက်​အသက်​အားဖြင့်​ ငယ်​လွန်းကြီးလွန်း သူ​တွေနဲ့ အိမ်​​ထောင်​ပြုခြင်း ဟာပျက်​စီးတတ်​တယ်​လို့ ဖတ်​မှတ်​ဖူးပ်ာတယ်​ ခွင့်​လွှတ်​နိုင်​သူကို ​လည်း​လေးစားအံ့သြမိ ပါတယ်​ ​အော်​ကြီးမားလိုက်​တဲ့ချစ်​ခြင်း မာန​တွေအရှက်​​တွေကို ပြည်​ဖုံးကားချနိုင်​ပါဘိ ကျ​နော်​​တော့ ပုခက်​လွှဲတဲ့လက်​​တွေကို ဒီလို မညစ်​နွမ်း​စေချင်​ဘူး အ​တွေ့ဆို​တော့လည်း ရုံန်းထွက်​ဖို့ မလွယ်​ဘူးထင်​ပါရဲ့ ကျ​နော်​ရန်​ကုန်​သားပါ တစ်​ခါတည်းမိတ်​ဆက်​ပါရ​စေ အိမ်​လည်​မထွက်​ဖြစ်​တာ ၃နှစ်​​ကျော်​​လောက်​ရှိ​ရော့မယ်​ စာပန်းလှလှ​တွေ မှင်​တံဖျားက​ကြွေပါ​စေ ​ရေးပုံ​လေးသ​ဘော​တွေ့ မိပါတယ်​ ခင်​မင်​လျက်​ ရန်​ကုန်​သား
ရင်လှိုင်းခတ်သံ Mon Feb 10, 01:11:00 PM GMT+8
မိသားစုတစ်ခု ခိုင်မြဲ သာယာဖို့ က နားလည်ပေးနိုင်ခြင်းပဲပေ့ါနော်။